Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Ndira 24, 2018
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, avo vari kumusangano we World Economic Forum kuDavos, Switzerland, vanoti havawirirane nehuwandu hwevanhu vanonzi vakafa munguva yeGukurahundi, vachitiwo hurumende yavo yakapasisa mutemo wakanangana nekugadzirisa nyaya yeGukurahundi.
MDC yoronga munamato uchaitwa neChishanu paHarvest House wekunamatira mutungamiri webato iri, VaMorgan Tsvangirai.
Vari mumabhizinesi madiki vokurudzirwa kuti vawane ruzivo rwakakwana mukufambisa mabhizinesi avo nenzira yakanaka sezvo mabhizinesi aya achibatsira zvikuru mukusimudzira hupenyu hweveruzhinji pamwe nehupfumi hwenyika.
Mutumbi wevaimbove mubati wehomwe muMDC-T, VaRoy Bennett, pamwe newemudzimai wavo Heather, avo vakashaya mutsaona yechikopokopo muAmerica svondo rapera, yotarisirwa kusvika muZambia svondo rinouya uko vange vachiita mabasa ekurima.
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm, tiri kutaura nezvekodzero dzekuvhota dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika.